नेप्से ५ अ‌ंकले उकालो लाग्यो ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेप्से ५ अ‌ंकले उकालो लाग्यो !
काठमाडौं, साउन ८ । अनलाइन कारोवार प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि केही दिन अन्योलमा रहेका लगानीकर्तालाई सामान्य त्राण दिने गरी शेयर बजारमा सुधार आएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार मंगलबार शेयर कारोवार मापक परिसूचक नेप्से ४.७७ बिन्दुले बढेर एक हजार १९९.२७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १‍.३६ बिन्दुले बढेर २५२.६८ बिन्दुमा पुगेको छ ।